पल जीः भिडियोलाई हाई, फिल्मलाई बाई ! « फिल्मी नेपाल
Published On : 30 September, 2020 3:35 pm
पल शाह नेपाली म्युजिक भिडियो दुनियाँका बादशाह नै हुन् भन्दा फरक नपर्ला । सबैभन्दा बढि पारिश्रमिक लिनेदेखि व्यस्त मोडलको नाम लिँदा पल नै अग्र पङ्तिमा आउँछन् । उनै पल फिल्ममा मोटो पारिश्रमिक दिँदा जोडी स्विकार गर्दैनन् तर भिडियोलाई भने जो कसैसँग जोडी बाँध्न पनि पछि हट्दैनन् ।
प्रसंग हो अभिनेत्री एलिजा गौतमसँगको । चर्चित सञ्चारकर्मी ऋषि धमला पत्नि एलिजाको फिल्म मोहले ‘अनुराग’ नामको फिल्मबाट डेब्यू पायो । उक्त फिल्मको स्कृप्ट तयार भइसक्दा निर्माण टिमले लिड अभिनेतामा पल शाहलाई प्रस्ताव राख्यो, १८ लाख पारिश्रमिक दिने सम्मको चर्चा चल्यो । तर पलले एलिजासँग जोडी स्विकार नगर्ने भन्दै फिल्म गर्न मानेनन् ।
त्यसो त उक्त समयमा सुरुवाती चरणमा पलले मोटो पारिश्रमिक मागेको र निर्माण टिम दिन तयार भएको समेत गसिप बजारमा गाइगुइँ चलेको थियो । तर आफ्नै निर्माणको फिल्ममा आफु नै हिरोइन हुने एलिजाको इच्छा अनि एलिजाको अपोजिटमा फिल्म नखेल्ने पलको अडानले उनि फिल्मको लिडिङ ‘स्क्वाड’मा बाट बाहिरिए ।
तर उनै पल पछिल्लो समय भने एलिजासँग म्युजिक भिडियो गर्न तयार भएका छन् । लकडाउनकै बीचमा एलिजा र पलले म्युजिक भिडियोमा लगातार जोडी बाँधे । भिडियोमै भएपनि पलसँग स्कृन सेयर गर्ने एलिजाको सपना पनि पुरा भयो ।
हुन त भिडियो खेले एकै दिनको सुटिङ सकिँदा लाख पाउने, महिनौंको सुटिङपछि तयार भएर फिल्म हलमा गएसी के हुने हो हो हैन त पल जी ? हुन त पल शाह खेलेको कुन चाहिँ फिल्म पो ब्लकवस्टर छ र !